Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 27/09/2020)
Ogwe na ndụ music gbapụta n'ebe nile Europe, àjà a ụzọ igbu oge a na; ebe ọṅụṅụ na songs igba free. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka nwere ụfọdụ fun na obodo gị n'oge ụgbọ okporo ígwè njem, anyị nwere aro ụfọdụ. Ebe a na-anyị n'elu 5 Ogwe na ndụ music nile Europe:
Dekọọ Shop bụ otu nke kasị mma Ogwe na ndụ music na France. Ọ bụ nnọọ dị n'èzí Bastille Metro ojii. Ọ bụghị nanị na ọ bụ mfe iji, ma ọ dịkwa nnọọ mma. The mmanya bụ na n'ihu, na ya nwere ezigbo egwu ogbo na azụ nke ebe mgbakọ, with the audience space hidden behind it.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Ogwe na Live Music na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)